Plain fonosana sigara azo nampiditra ny 2015 - News Fitsipika
Plain fonosana sigara azo nampiditra ny 2015
Sigara azo namidy tsotra fonosana teto Grande-Bretagne avy 2015 araka ny governemanta nahatonga Alakamisy hamelombelona ny politika mikendry ny fampiatoana ny tanora avy maka fifohana sigara.
Minisitry ny Fahasalamana Junior Ellison Jane fa tsy miankina famerenana ny porofo eo amin'ny tani-hay fonosana ho ataon'ny Martsa.
Praiminisitra David Cameron ny governemanta tao an Jolay nahemotra drafitra mba hanerena sigara orinasa hampiasa tsotra fonosana, nanao hoe: dia niandry ny mahita ny vokatry ny hetsika toy izany koa tany Aostralia.
Ny governemanta dia nilaza ho miahiahy momba ny fiantraikany eo amin'ny asa ao amin'ny paraky orinasa fa ny fandraràna ny notombohina tamin'ny vy fonosana mety ho toy ny Grande-Bretagne mivoaka avy karena.
Fa mpanompo niova ankehitriny Mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny fanambarana ny Review.
“Tsy maintsy manao izay vitantsika isika mba hanakanana ny olona tsy handray tanora ny fifohana sigara eo amin'ny toerana voalohany raha tiantsika ny hampihena ny tahan'ny fifohana sigara,” Ellison nilaza parlemanta.
“Mino aho fa ny fotoana marina ny mitady ny tsy miankina amin'ny fijery na ny fampidirana ny mitovy fonosana dia mety hanan-kery eo fahasalamam-bahoaka. Manokana, Tiako ho fantatra momba ny mety ho fiantraikany eo amin'ny tanora.”
Aostralia tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa dia lasa firenena voalohany eto an-tany mba hanerena sigara orinasa mba hivarotra sigara in mitovy, oliva-maitso fonosana mitondra ny mitovy typeface ary tena feno sary fampitandremana ara-pahasalamana.
Fahasalamana fikambanana mpanao asa soa no nanosika mafy ho toy izany koa mihetsiketsika ao Grande-Bretagne, nanao hoe: notombohina tamin'ny vy miloko fonosana mampirisika ny tanora mba hahita ny fifohana sigara ho toy ny asa glamorous.
Fa sigara orinasa efa nilaza ny fandraràna hanana fiantraikany firy eo amin'ny sehatra fifohana sigara ary mety hitarika ho amin'ny fiakaran'ny sandoka sigara.
Ny mpanohitra ny antoko Asa niampanga Cameron ny Toroana-nitarika ny governemanta ny baiko ny famerenana satria napetraka ho very ny fifidianana eo amin'ny tani-hay fonosana ao amin'ny ambony House ny tompo volana.
“Ihany ny governemanta ho shambolic toy ity iray ity izao mety ho U-fihodinana teo amin'ny U-indray,” hoy ny fahasalaman'ny Asa Luciana mpitondra tenin'ny Berger.
“Standardised fonosana sigara tsy dia tsara tarehy mahatonga ny tanora. Tokony ho legislating izao, tsy ela.”
Cameron dia tonga teo ambanin'ny afo tamin'ny volana Jolay, raha ny fandraràna ny notombohina tamin'ny vy fonosana dia nahemotra, amin'ny mpanohitra mpanao lalàna nanontany raha ny fanapahan-kevitra dia voasariky ny rohy eo ny lehiben'ny antoko tetikady sy ny sigara orinasa.
Lynton Crosby, Aostraliana tetikady ho an'ny Cameron ny Toroana antoko, panjakana mitantana ny fifandraisana mafy orina izay efa niasa ho an'ny sigara teo aloha orinasa manohitra ny mihetsiketsika ao Aostralia.
Cameron ofisialin'ny mpitondra tenin'ny nandà nisy misy ifandraisany Crosby sy ny fahatarana.
Ity lahatsoratra ity, Plain fonosana sigara azo nampiditra ny 2015, dia mpilaza vaovao avy amin'ny AFP, ary dia nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2013 AFP. Zo rehetra voatokana
Related lahatsoratra manerana ny aterineto
Sketch: Ny hevitra ao ambadiky ny iray fonosana fag
Plain fonosana famerenana mpanoratra 'tsy misy rohy sigara orinasa’
← Prince Harry maka nianjera Charity Nandritra Tendrontany Atsimo Trek New fitsapana ho an'ny steroids amin'ny fanatanjahan-tena harato 260 zavatra tsara →